musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Updated News » Kubatanidza DC Magamba uye Villians Via Mutambo Wenhare
Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! • Updated News
Yekutanga-sese puzzle RPG mobile game ine iconic DC mavara iri kusvika muna 2022 uye yave kuvhurirwa pre-gesitrations.
Anotungamira mugadzirisi wevaraidzo wenhare Ludia, studio yeJam City, nhasi afumura DC Magamba & Vakaipa, mutambo wekutanga-yekutamba-mutambo wepuzzle (RPG) wakaiswa muDC Universe, wakapihwa rezenisi naWarner Bros. Interactive Entertainment akamiririra DC. Mutambo uyu uchafadza vateveri veDC makomiki nerondedzero yepakutanga ine nyeredzi dzese dzevanodiwa Super Heroes uye Super-Villains vanosanganisira Batman, Superman, Wonder Woman, the Joker naHarley Quinn. DC Magamba & Vakaipa vachave varipo pasi rese kutanga kwa3 paApp Store uye Google Play. Kutanga nhasi, magamba uye villains vanogona kufanonyoresa kuti vawane kumutambo uye kugamuchira zvakakosha mabhonasi zvinhu pakuvhurwa, pa www.dcheroesandvillains.com.
Inoratidzira rondedzero yakapfuma, yepakutanga, DC Magamba & Vashasha inounza nzvimbo dzinoyevedza senge mikoto yeGotham Guta uye nekwakadzika kweAtlantis kuhupenyu. Mhepo isinganzwisisike yakabvisa masimba makuru uye zvichave kune vatambi kutora chikwata chekupedzisira chemasimba, kubva kumativi maviri ekururamisira, kudzivirira kutsakatika zvachose.
Vatambi vanozofanirwa kuve nehungwaru pavanenge vachifamba nemumutambo wakasimba weDC Heroes & Villains, wakazadzwa nekunetsa kwemutambi mumwe chete-3 hondo uye zviitiko zvechikwata kwavanozoda kuunganidza shamwari dzavo kuti vakunde maboss kuti vawane mibairo mikuru. Zviitiko zvakarongwa zvepamoyo zvinosanganisira mitambo yePVP uye Guild Raids ichaunza mafani eDC kubva pasirese pasirese kuti vapinde muhondo kuti vawane mibairo yakasarudzika mumutambo.
"Tinodada zvakanyanya kuzivisa zita redu idzva, DC Magamba & Vakaipa," akadaro Alex Thabet, CEO weLudia. “Mutambo uyu unoratidza zvakanakisa zveLudia, ine mutambo unonakidza uye matekinoroji anove mucherechedzo wemitambo yedu yekuhwina mibairo. Isu tinotenda kuti izvi zvichapa vateveri veDC maonero matsva evatambi, nharaunda uye ruzivo rwavanoda. "
"Hatina kukwanisa kufadzwa neDC Magamba & Vakaipa, izvo zvinoisa tarenda raLudia uye hunyanzvi pakuratidzwa kuzere," akadaro Chris DeWolfe, mubatsiri uye CEO weJam City. “Aka kachange kari kekutanga kuti vateveri veDC vagadzire zvikwata zvavo zvezviroto mumutambo-3, uchisanganisa magamba nevakaipa. Ndine chivimbo chekuti vatsigiri vachafara nezvavanogona kuita mumutambo uyu.”
Jam City nguva pfupi yadarika yakapedza kutora kwayo Ludia munaGunyana 2021, ichienderera mberi nekuzadzisa chinangwa chekambani kusimudzira portfolio yayo yepasi rose yezvitudiyo zvepamusoro zvinogadzira uye kushambadza yepamusoro-soro yemukati-yakagadziridzwa uye yechitatu-bato ine rezinesi IP-yakavakirwa mitambo.
Nzvimbo dzepamusoro dzeVadi veClass Architecture
Hilton Inovhura Hotera Yakakura muAsia Pacific